Waa maxay microbiota mindhicirka 3 talo oo lagu hagaajinayo | Bezzia
Toñy Torres | 12/10/2021 20:00 | Tilmaamaha caafimaadka
Waxaa hubaal ah in ka badan hal mar waxaad maqashay dhirta xiidmaha iyo sida ay muhiimka u tahay in la ilaaliyo si loogu raaxaysto caafimaad wanaagsan. Waa hagaag, waxa sida caadiga ah loo yaqaan flora mindhicirka, waa waxa erey ahaan sayniska loo yaqaan microbiota mindhicirka. Macnaha eraygani waa asal ahaan ururinta (baaxad weyn) ee jeermisyada ku nool xiidmaha.
Microbiota mindhicirka wuxuu ka kooban yahay tiriliyoonno jeermisley sida bakteeriyada, fayrasyada, fangaska, iyo xitaa dulin. Shaqooyinka mikrobiota waxaa ka mid ah nuugo kalsiyum iyo birta, waxay soo saartaa tamar waxayna naga ilaalisaa duulaanka ka yimid bakteeriyada kale iyo jeermiska oo noqon kara cudurro. Ka sokow buuxinta shaqooyin kala duwan oo ku saabsan horumarinta habka difaaca jirka.
1 Waa maxay microbiota mindhicirka iyo sidee loo sameeyay
1.1 Sida loo hagaajiyo microbiota
Waa maxay microbiota mindhicirka iyo sidee loo sameeyay
Microbiota mindhicirku gabi ahaanba wuu ka duwan yahay qof kasta, oo ah halabuur u gaar ah oo la sameeyay xilliga dhalmada. Hooyadu waxay wareejisaa dhammaan noocyada jeermisyada waqtiga dhalmada, iyada oo loo marayo siilka iyo saxarada marka ay timaado dhalmada siilka. Ama jeermisyada ku jira deegaanka marka ay timaado dhalmada qalliinka. Taasi waa, microbiota -ku wuxuu bilaabmaa inuu samaysmo laga bilaabo dhalashada.
Si kastaba ha ahaatee, waqtigaas ayaa bilaabanaya hawl qaadan doonta sanado in la dhammaystiro. Inta lagu jiro 3 -da sano ee ugu horreysa nolosha, noolaha yaryar ee ka kooban microbiota mindhicirka ayaa kala duwan. Iyo ilaa qaangaarnimada kala -duwanaanshahan iyo xasilinta ayaa sii socon doonta, taasoo way sii xumaan doontaa oo way xumaan doontaa marka ay gaadho qaangaadhnimada. Shaqooyinka mikrobiota waa lama huraan sidaa darteedna aad bay muhiim u tahay in la hagaajiyo oo la ilaaliyo nolosha oo dhan.
Shaqooyinka mikrobiota ee caafimaadka aadanaha ayaa aasaas u ah, run ahaantii, waxaa loo tixgeliyaa inay tahay xubin jirka ka mid ah oo shaqeyneysa. Halabuurkaan jeermisyada wuxuu la shaqeeyaa xiidmaha iyo waxay fulisaa afar hawlood oo waaweyn.
Fududee dheefshiidka: wuxuu caawiyaa xiidmaha si nuugo nafaqooyinka sida sonkorta, fiitamiinno ama asiidh dufan oo lagama maarmaan ah, iyo kuwo kale.
Waxay lagama maarmaan u tahay horumarinta habka dheef -shiidka: Marxaladda koowaad ee dhallaanka iyo dhallaanka, mikrobiota weli waa daciif oo nidaamka dheef -shiidka ma bisla. Sidaa darteed, waa in taxaddar gaar ah la yeeshaa bakteeriyada geli karta nidaamka ilmaha cuntada, biyaha ama taabashada meelaha wasakhaysan.
Wuxuu sameeyaa caqabad ilaalin ah: lid ku ah bakteeriyada kale ee khatar gelisa noolaha ayaa ku wada nool jirka aadanaha.
Xoojinta difaaca: microbiota mindhicirka ayaa caawisa xoojiya nidaamka difaaca jirka, kaas oo naga ilaaliya bakteeriyada iyo fayraska.
Sida loo hagaajiyo microbiota
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu hagaajin karo loona xoojin karo microbiota xiidmaha, maadaama ay ku saabsan tahay abuurista nooc saameyn ah oo ku saabsan beeshan noolaha, kor u qaadida caafimaadkooda si ay si sax ah u gutaan shaqadooda. Habka loo hagaajin karo ubaxa xiidmaha es wadarta tilmaamaha soo socda:
quudinta: Isticmaalka cuntooyinka dabiiciga ah, oo aan lahayn walxo waxyeello u geysan kara caafimaadka mikrobiota. Raac, sii wad cunto kala duwan, dheelitiran oo dhexdhexaad ah oo ay cuntooyinka dabiiciga ahi ku badan yihiin, ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo caafimaadka heer walba.
Probiotics: Waxay kala yihiin cuntooyinka ama kaabisyada ay ku jiraan noolaha noolaha kuwaas oo u adeegaya hagaajinta iyo dayactirka ubaxa xiidmaha.
Ka hortagga antibiyootig: kiiskan waa cunto leh a waxyaabaha kujira xaydh badan kuwaas oo bixiya nafaqooyin microbiota mindhicirka
Jidhku waxaa ka buuxa nooleyaal nooleyaal ah oo ku nool meelo kala duwan oo jirka ah, sida carrabka, dhegaha, afka, siilka, maqaarka, sambabada, ama kaadida. Kuwani waxay halkaas u joogaan sababtoo ah waxay leeyihiin shaqo gaar ah oo lama huraan ah kiis kasta iyo si loo helo caafimaad wanaagsan waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo bakteeriyada jirka ku jirta. Raac cunno hodan ku ah miraha iyo khudaarta, iyo sidoo kale cuntooyinka leh fiber -ka -dhalaalaya, maadaama ay doorbideyso koritaanka iyo waxqabadka jeermisyada microbiota mindhicirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Tilmaamaha caafimaadka » Waa maxay microbiota mindhicirka 3 talooyin si loo hagaajiyo